Ichi ndicho chikonzero nei United States ichitarisira 'avalanche' yekudzingwa
Ichi ndicho chikonzero nei US ichitarisira "kukanganiswa" kwekudzingwa
Sezvo salons vhudzi, machechi nemaresitoreti zvakavhurwazve muUnited States, matare ekudzinga vanhu akavhurwazve. Mhedziso yemubatanidzwa yekudzinga parizvino yapera uye vezvematongerwo enyika havasi padyo nekubvumirana pane chitsva chehupfumi. Vamiriri nenyanzvi vari kunyevera kuti kushungurudzika kukuru kwekudzingwa kuri kuuya, kutyisidzira mamirioni eAmerica nekushaya pekugara sezvo denda iri richiramba richipararira.
Chinyorwa ichi chakatanga kubudiswa musi waChikumi.
Akagara mumotokari yake akamira panze peimba nyowani chena muKansas City, Missouri, kwaakange agara makore maviri, Tamika Cole akaremerwa. Ainge ashanda kwenguva yakareba seanoshanda semuchina husiku hwapfuura, pafekitori maakange achigadzira mabhodhoro ekuchekesa madhora gumi neawa. Iro basa rakanaka rakatsiga. Kunyange zvakadaro, Cole akange ave pedyo nekurasikirwa nemba yake. Tsinga dzake dzakapfurwa.
"Ndiri kufanira kuitei?" " anoti. Ndaneta nekuchema. "
Cole akati akadzokera kumba kutanga kwaMay kuti anowana chinyorwa chekunodzika chakanamatira pamusuwo wake. Akatenda kuti yaive mhaka yekunetsana kwaaive nako nemuvakidzani wake kumusoro, asi muridzi wemba haana kumbomuudza nezvazvo asati amhan'ara.
Nekuda kweiyo coronavirus, moratorium pakudzingwa yaive munzvimbo yeKansas City uye muridzi weCole akatadza kumumanikidza kuti afambe ipapo. Asi iye akati izvo hazvina kumutadzisa kuyedza kumuita asina kugadzikana sezvinobvira, kupinda mumba make iye asingazive, kutema simba rake, kusunungura uye kubvisa gonhi rakadzivirirwa redziviriro rake.
Zvino, nekuda kwekukurumidza kuvhurwa kweMissouri uye nyika dzakafanana munyika yese, moratorium yakakwanisa kufa. Dziviriro yemuchengeti yaive naCole yaive yaenda uye anga akatarisana nekushaya pekugara mukati medenda.
Anoti, "Ndakamuka husiku hwese." "Ndiri kuyedza kubudirira." "
Nhoroondo yevhidhiyoKurarama pasi pekutyisidzirwa kwekudzingwa muchirwere
MuKansas City, matare emuno akaisa runyararo pakudzingwa mushure mekuratidzira kwakaitwa nevanorwira kodzero dzeanogara. Mibato yakafanana yakave yakabudirira nyika yose, uye sezvo denda rakanga razara muUnited States pakati pakati paMbudzi uye kupera kwaKurume, nyika zhinji dzakamira kuenda kudzimba neimwe nzira kana fomu. imwe - padunhu kana yemunharaunda - senzira yekubatanidzwa. vachangoburwa basa mapurani uye seyambiro yekudzivirira kupararira kwegoronavirus.
Mutemo weCARES, wakapihwa kutanga kwaKubvumbi, unodzinga vanhu vanogara mune dzimba dzinopihwa rubatsiro kana kuti muzvivakwa zvinotsigirwa nezvikwereti zvehurumende.
Wongororo yakafungidzira kuti muna Chivabvu vangangosvika chikamu chetatu chevashandi vaisabhadhara varidzi vemba yavo nenguva, uye vanopfuura hafu varasikirwa nemabasa nekuda kwedambudziko.
Asi nyika painotanga kuvhurika zvakare, tsika dzinopera uye 40% yematunhu haichatopi varimi. Dziviriro dzeCARES Act zvinoshanda chete kune isingasviki chetatu chenyika dzemamiriyoni gumi nemashanu vagari vemo. Missouri nderimwe remapfumbamwe eU.S. nyika dzisati dzambopa chero mhando yekunyorwa kwese munyika kana kugara munzvimbo dzekudzinga vanhu, vachisiya maguta, matare uye kunyange matare emunhu akazvitarisira. ziva mafambiro ekuenda kumberi. Sezvo mawadhi epamberi anowira pasi, sekunge zvishoma nezvishoma mafuratera aripo, mazana emakore ekudzingwa ari kutoenderera mberi mumatunhu akaita seMissouri, Virginia neTexas.
Zvinogona kunge zviri kutumira zviuru zvevanhu kumisha isina pekugara kana kuwonda pasi nemhuri, panguva iyo nyaya dzemakona dzichiri kukwira munzvimbo zhinji.
"Hapana dare chero rinofanirwa kudzinga chero munhu kusvika nguva yekuti denda risati ranyura zvakakwana," akadaro Eric Dunn, director wegweta reNational Housing Law Project. "Vanhu vazhinji vari kudzingwa parizvino - imari yavo yavhiringidzwa munguva yedambudziko. Ivo vanofanirwa kuenda kupi? Izvo hazvina kuita sekuti ivo vane mari yekutamira kune imwe nzvimbo. "
Imwe yenzvimbo dzekutanga munyika kutumira inoshungurudza kudzingwa nhamba ndeye Milwaukee, Wisconsin - kumusoro 37% gore-gore, zvichienderana nedata rakangoburwa nePrinceton University Deportation Lab. pekupedzisira. MuColumbus, Ohio, hurukuro dzekudzinga dziri kuitirwa panzvimbo inoitirwa kokorodzano kuzozvidavirira uye kusangana nenhungamiro dzekufambidzana.
MuNorth Carolina, kudzoserwa kwematare zviuru zvisere kunotarisirwa kutangazve muna June 9.
Hofisi yeMutungamiriri weDare reMicrosoft State yakafungidzira kuti kana kumisikidzwa kwavo kuchapera mwedzi uno, vanhu makumi manomwe neshanu vachamiswa.
MuNew York City chete, mubatanidzwa wevatsigiri unofungidzira kuti kudzingwa zviuru makumi mashanu kuchaiswa mutongo kana Gavhuna Andrew Cuomo apera.
"Kudzingwa kwagara kuchikwira kwazvo munyika muno. Asi idzi huwandu hwakanyanya," akadaro Emily Benfer, achishanyira purofesa wezvemitemo paColumbia University uye aimbova gweta redzimba.
"United States inogona kutarisira kusarudzika kwekudzingwa uye ichakanganisa nharaunda dzese ... Tichapora muzvizvarwa zvinotevera pasina kupindira kwemubatanidzwa." "
Vhiki mushure mekunge Kansas City yovhura zviri pamutemo matare ayo, Tamika Cole akanzi aonekwe na10: 30 a.m. kupokana pamberi pemutongi kuti aibvumidzwa kugara. Iye aisave negweta, uye zvake zvinyorwa zvake, iro rake rezviitiko uye rimwe zano raakawana kubva kusangano risiri remubhadharo wekodzero.
Cole akati airwara nematambudziko ekufema. Dzimba dzematare edzimhosva dziri pauriri hwechinomwe chivakwa icho chingosimudzira imwe chete ichimhanya nguva zhinji uye inogona kunzwa mazana ematare pazuva, zvichiita kuti zvisanzwisisika kuyera nhanho yenzvimbo inozochengetedzwa zvakanaka.
Asi kuti agare padenga remusoro wake, Cole akange asina sarudzo - aifanira kuenda.
Uye kana akazviita, angangopotsa arasikirwa. Kuongororwa kwezvakabuda mumatare ekudzinga muKansas City kubva 2006 kusvika 2016 yakaratidza kuti kupfuura 99% yemhosva yekudzingwa yaive achipesana nemuridzi.
"Ndiri kufanira kuitei?" Cole akaramba achidzokorora. "Pane coronavirus." Handikwanisi kufamba ndichienda chero kupi kwekugara. Ndicha [gara] mumotokari yangu. "
Mwedzi yakawanda denda repasi rose risati rasvika kumahombekombe eU.S., Darquita Hoffman akawira kumashure kwezvikwereti zvake uye akarasikirwa nemotokari. Pasina chokufambisa, akarasikirwa nebasa rake rekuchenesa dzimba. Pasina mari, akarasa imba yake.
Mushure mekutaura kune maneja weHoward Johnson hotera muCollege Park, Georgia, akafunga kuti awana mhinduro. Kana Hoffman akachenesa dzimba dzehotera, aigona kuwana rekudzora pakubhadhara kwevhiki. Aizoshanda uye agadzirwe dzimba, achibhadhara madhora mazana maviri neshanu pasiti yemubhedha nekaviri mubhedha wevana vake uye machira akasundirwa kumadziro.
"Denga uye ndine mari," anoyeuka achifunga.
Asi mushure memwedzi mishanu yekugara muhotera, sekufambiswa kwemhosva dzemakona dzakatsvaira nyika, manzwiro aHoffman nezvegadziriro akachinja. Akataura kuti nekuda kwekuti akabhadharwa nekamuri uye kwete neawa, machekeredzwa ake aidzoserwa kuhotera. Sezvo kushanya kwakamira, pakanga paine makamuri mashoma uye mashoma ekuchenesa uye macheki aive achiwedzera mashoma. Hoffman akavhunduka pamusoro pekuchenesa dzimba dzevasingazivikanwe uye kuunza hutachiona kumba kune vake vanasikana vane makore matanhatu uye gumi nemaviri. Saka akaisa vhiki mbiri chiziviso.
Sekureva kwaHoffman, hotera yakamuudza kuti imba yake yaizokurumidza kuwedzera kusvika pamadhora mazana matatu pasvondo, kunyangwe mavhiki maviri asati asvika, uye kuti aive nechikwereti kwaari kwemavhiki maviri aakange amuudza. akange ati haafanire kubhadhara. . Paakaratidzira, akati hotera yakanga yatanga kumubhadhara mari yake yemubhadharo. Akadaro achivhara simba muroom make kwemazuva matatu.
Vakabva vatanga kufonera mapurisa.
Sekudzinga, zvese zviri pamutemo uye zvisiri pamutemo, zvinowanda muUnited States, ivo vari panjodzi yekusagadzikana nehuwandu hwevanhu vakatopunzika neconavirus - maAmerican America.
Pamberi pechirwere ichi, kutsvagurudza kwakaratidza kuti pane kudzingwa kwemamirioni mazana matanhatu kunoitika gore rega rega (anenge mana paminiti), vaive nemhedzisiro yakasarudzika kumhuri dzevatema, kunyanya vakadzi vatema vanowana mari shoma. Mune gumi nematanhatu, vakadzi vatema vanokwanisa kupfuura kudzingwa sevachena, maererano nehuwandu kubva kuAmerican Civil Liberties Union.
"Vatengesi vatinonyanya kugara navo ndiamai vatema vasina amai," akadaro Erica Taylor, director weMugovera Lawyer Program kuAtlanta Volunteer Lawyers Foundation, iyo inomiririra pamutemo mahara kune vatengi vanotambura.
Atlanta iri muFulton County, Georgia, iyo ine huwandu hwe45% yevatema, uye pane zviuru zviviri zvinoramba zviripo zvekudzingwa. Yepfuura Yekufambisa Lab yekutsvagurudza yakawana kuti kudzingwa kwainyanya kuwanikwa mumaguta kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika uye munzvimbo idzo huwandu hwevanhu hwaive 2000% yeAfrica American kana kupfuura.
Georgia yaive yeimwe yenyika dzekutanga munyika kuti ivhurwe zvakare mazariro, maresitorendi, nzvimbo dzekutamba, uye makirabhu, uye kubvumira kuungana kwevanhu vanosvika makumi mashanu. Panenge panguva imwe chete iyoyo Gavhuna Brian Kemp akazivisa kuvhurwazve kwenyika, yeCenters for Disease Control and Prevention kudzidza yakaitika muGeorgia inoratidza kuti vanopfuura makumi mana neshanu evarwere vechipatara vane coronavirus vaive vatema.
"Vatengi vedu ava," akadaro Taylor. “Ivo ndivo vanonyanya kushomeka. "
Devin Q Rutan, muongorori kuEviction Lab, akataura kuti kunyangwe munguva dzakajairwa, kudzinga kunogona kuita mutsauko pakati peimba inogara yakasimba uye nyonganyonga.
"Tinoziva kuti kudzingwa kune kukuvadza kwakanyanya kumari dzemhuri uye hutano." Vanotangira kurasikirwa nebasa, ”akadaro. “Tinodzinga vanhu panze pazvinenge zvine njodzi, pamusoro peizvozvo, padenda. Izvo zvatova kuparadza kuti mhuri dzidzoreredzwe nekubviswa. "
Varidzi vazhinji nevaridzi vezvivakwa havatombofunga nezvemuridzi wemukati nekudzingwa kwavakaita kare pane kwavo rekodhi.
Asi kuenda kudare haisi nguva dzose kuti kudzinga kunofamba sei, kunyanya panguva yekoronavirus. Magweta akati wandei uye nyanzvi dzakataura neBBC dzakataurawo kuona kuwedzera kwe “kuzvibatsira” kudzinga vanhu, zita rakarereka rekusabvumirwa zvisiri pamutemo zvinoreva kuti varidzi vepamba dzimwe nguva vanogona kushandisa kumanikidza varimi vavo kuti vabve.
"Vanhu vari kuchinja makiyi, vachicheka zvekushandisa nekutyisidzira," akadaro Dunn. "Mumamiriro ezvinhu epamberi pesendai iyi yakanga isiri mutemo, uye ikozvino zvinoita sekuti nyaya idzi dzakajairika. "
Hazvisi zvese kudzingwa zvisiri pamutemo kunoitwa nenzira yakaipa - vamwe varidzi vepamba vanorova chibvumirano nemaoko nevarimi kuti vabve kunze uye kudzingwa hakuzviratidze pane rejenisi remuridzi, izvo zvinogona kukanganisa zvakanyanya kugona kubhadhara kumwe kunhu. Asi Taylor akati Sangano rake riri kuona kakawanda nyaya dzevaridzi vekugara vachishandisa hunyanzvi uye zvisiri pamutemo kutyisidzira varimi pachivakwa, kana zvinopesana, vachipa zvibvumirano zvisina musoro izvo zvinoita kuti anobvumidza muridzi kugara - sekuita bonde. nomuridzi wemba akachinja muripo.
"Ndakafunga kuti ndasvika padanho randakanga ndaona zvese, asi munguva ino yekupedzisira maitiro ataona kubva kuna varidzi anga asiri eupenzi uye achiseka," akadaro. “Sezvo vasingakwanise kushandisa nzira yeruramisiro kuita basa ravo rakasviba, zvinounza hukasha muvanhu. "
Nenhlanhla kuna Hoffman, mapurisa eColor Park akapindira mukamuri rake, mapurisa akabvuma kuti somunhu anogara kwenguva refu muhotera, Hoffman anokwanisa kusimudzwa. Ivo vanomuisa mukuwirirana nesangano raTaylor, izvo zviri kumubatsira kuti agare kwenguva iripo uye kurwira kuti adzore muhoro wake.
Mumwe murume akazvizivisa semaneja wehotera akaramba kuti iye akatema masimba kuna Hoffman, asi akaramba kutaura zvimwe.
Asi Hoffman akati haana kuvimba nehotera iyi kuti isakanda zvinhu mumigwagwa iye asipo. Haawanzo kubuda mukamuri ikozvino.
"Ndave ndiri mukadzi mumunyengetero," anoseka zvinyoro-nyoro. “Munhu wese anoti, 'Zvakanaka kuti ugare wakasimba,' asi ndinoziva kuti inyasha dzaMwari dzinondivimbisa. Zvechokwadi. Ndinozviitira vana vangu. Ndinofanira kubuda mumamiriro ezvinhu aya. "
Pazuva rekunzwa kwake - zuva raitonhora uye richinaya muKansas City - Tamika Cole akasimuka maawa mashoma mushure mekuchinja kwake fekitori kwapera uye akafamba akananga kuimba yekutonga.
Paakasvika ikoko, boka revarwi KC Tenants raigadzirira kuronga "kufa-mukati" pamatanho edare, pasi pechifananidzo cheMutungamiri Andrew Jackson akatasva bhiza. Vamiriri vemitemo vakasimbisa mureza mukuru padanho raJackson, uyo - seMutungamiriri wechinomwe weUnited States - akasaina Indian Removal Act ya 1830, iyo yakamanikidza makumi ezviuru evaNative America kusiya nyika yavo uye inotungamira ku "Trail of Misodzi".
Iyo banner yakaverenga: "PEDZA IZVI ZVINYANYA KANA VANHU VAKAFA".
Cole paakaita nzira yake mukati, vekuratidzira vakarara pasi - tsoka nhanhatu parutivi - pane mvura yakanyorovera kongiri.
"Dzimba ndidzo dzainyorerwa [yeiyo coronavirus]," akadaro Tara Raghuveer, director weKC Tenants. “Vanhu vachamanikidzwa kuzviisa pangozi yehutano zvakanyanya kuti vaende kumatare vadzingwe. "
Gina Chiala, Gweta reCarlland Center for Jobs uye Nerusununguko, akabvuma kuti kusvika pari zvino, huwandu hwekudzingwa muKansas City huchiri pasi kubva pagora.
"Handifunge kuti nhamba yakazara yasvika." Ini ndinofunga zvichiri kuitika, ”akadaro.
Kunyangwe pasina kuwedzera huwandu hwenyaya, Chiala akati haafarire zvavakaona mukati mematare edzimhosva - kuti vanosimudza uye imba yekutandarira vaive "yakazara vanhu. ". Uye akati achangobva kuva nemutengi ane mwanakomana wake aishandira mufekitari nekubuda uye akaongororwa hutachiona hwehutachiona. Kunyangwe aive ari pakuratidzwa, Chiala achiri akamiririra mukadzi.
“Hazvina kuchengeteka kune varimi. Hazvina kuchengetedzeka isu. Asi ndinonzwa sekunge tinofanirwa kuzviita, ”akadaro. "Ndinovimba hapana anorwara." "
Cole paakabuda kunze kwedare maawa gare gare, yaive aine nhau dzakasanganiswa - iye akapihwa nguva yekuwedzerwa, imwe svondo kuti asimbise nyaya yake. Asi akabvawo akabatwa moyo nemutsa wegweta remuridzi wake kumutongi.
"Anofanira kunge aine nyaya dzakawanda ikoko," akadaro.
Kuti agadzirise zvinetso zvekuchengetedzeka, mamwe matare eU.S. anopa "kunzwa kure" uko varimi vanogona kuratidzira parunhare kana kunyange vhidhiyo. Asi vamiriri vanopatsanurwa nezvekubatsira kwavo - hazvizivikanwe kana varidzi vasingakwanise kubhadhara rendi vane internet yepamhepo kana kunyange nhare inoshanda.
Uye vamiriri pamativi ese enyaya - vaviri varidzi uye varidzi vepamba - vari kuda imwe mhando mhinduro inogona kudzivirira nyaya kupera mudare munzvimbo yekutanga.
"Tinoda imwe nzira yekudzinga mumwe munhu, nzira yekuwana mari inoenderera mberi yekuchengeta uye kuchengeta munhu iyeye akavakirwa ichave yekukunda munhu wese," akadaro Jay Martin, director director wechirongwa ichi. Kuvandudzwa kweVagari venharaunda, iyo inomiririra vashoma, varidzi vedzimba vakazvimirira muNew York City.
VaMartin vakati sangano ravo riri kushushikana kuti sezvo vanhu vazhinji vari kutadza kubhadhara rendi, varidzi vezvivakwa havasi kuzokwanisa kubhadhara mutero wepfuma, mari dzekubhadhara uye yavo mamogeji, ayo anozopedzisira atungamira pakufanozivisa uye kubhengi kutenga kune akawanda-mhuri dzimba. Iyo yakanyanyisa-mamiriro ezvinhu anogona kutaridzika sedambudziko rekufungidzira ra2008, kukanganisa kukuru kune varidzi vezvivakwa zvevaridzi panzvimbo pevaridzi vega, uye mukana wekuuraya unokanganisa varimi.
Anoramba zano rakaiswa pamberi penzvimbo inosimudzira vanhu kuti "kudzima rendi" kunoisa varidzi mukuchengetedzeka, sezvo chivakwa pachacho chingagone kutengwa kunze nehomwe yebhanga kana bhanga, uye varimi vangarasikirwa. kodzero dzawo dzose kune chivakwa.
Benfer akabvuma kuti chainyanya kudiwa chirongwa chehurumende chekubatsira vanhu kuti vagare mudzimba dzavo, asi zvakare vachive nechokwadi chekuti varidzi veimba nevaridzi vepamba vanowanawo mari yavanoda ramba uchigadziriswa. Anoreva mutemo weHEROES, uyo wakapasiswa neImba uye unosanganisira madhora zana emamiriyoni emubatsiro werenji. Iyo $ 100 trillion package iri yakanamatira muSeneti kwemavhiki, uko maRepublican vari kutonga.
"Pakupera kwezuva, rendi, musika wemba ndidzo musimboti wenharaunda dzedu. Kana rendi isiri kubhadharwa, mitero yezvivakwa isiri kubhadharwa, zvikwereti zvisingabhadharwe, vashandi vanogadzirisa zvinhu havabhadharwe, ”akadaro. "Izvi zvese zvine hukasha mumagariro aya. Inokanganisa tsika yedu yedzidzo, inobata izvo zvinokosha zvevagari. Kana icho chinongedzo chaputswa, tinoona iyi ketani mheni.
“Maroja haasiri iwo chete anotambura. "
Husiku hwakatarisana nedare rake rekupedzisira Kansas City, Tamika Cole akatarisa kupera simba kubva pabasa rake, ruzha rwemidziyo ichirira uye achirovera kumashure kwake.
"Ini handina zano." Handizive chandiri kurwira. Ndine mareti angu. Ndine mafoto nemavhidhiyo madiki, ”anodaro. "Ini handina basa chaizvo." Ini ndinongonamata kuti mutongi andipe imwe nguva kuti ndiwane pekuenda. "
Cole anga akaisa imwe nzvimbo kufambisa, asi aisazogadzirira kusvika June 15. Izvi zvakamusiya angangoita mazuva gumi pasina pekugara kana nzvimbo yekuchengetera zvinhu zvake. Kunyangwe iye aine mhuri mudhorobha, Cole akati aisada kuzviisa pachezvake kana mhuri yake panjodzi yekuwana Covid-10.
"Hafu yemhuri yako haatombodi kuti iwe uvepo nekuti havazive kuti ndiani anorwara kana kuti kwete," akadaro.
Pana June 4, Cole akadzokera kuimba yekutonga zvakare. Paakadzoka, airatidzika kunge munhu akasiyana zvachose.
"Zvatopera," akagomera. “Hazvizove pamanyorerwo angu. "
Cole akati gweta rinorwira kodzero dzemuridzi - anga asina chokwadi kuti kupi - mudare redzimhosva akanzwa nyaya yake. Gweta rakayambira Cole kuti ataure negweta remuridzi wemba yake nekutsanangura kuti aida kuenda kunobhadhara rendi kana angangosara nemazuva gumi kuti abude. Sekureva kwaCole, muridzi wacho akaramba achibvuma.
Chinyorwa ichi chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53088352?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world&link_location=live-reporting-story
Ichi ndicho chikonzero nei US ichitarisira 'kuvenga' kwekudzingwa
235 vanotama kubva kuChannel vakasungwa mungarava 17 pazuva rimwe chete